July | 2015 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
July 31, 2015 drkokogyi
၂၀၁၃ ကျွန်တော် အာဖရိကမှာ နေတုံးက Ko James Mint page မှာ ဒီအကြောင်း ရေးဖူး ပါတယ်။ အဲဒီစာ ကတော့ သူ့ အကောင့် ကျသွားတာနဲ့ ပြန်ရှာမရ တော့ပါဘူး။ ဒီရက်ပိုင်း မှာ အီသီယိုပီးယား နဲ့ မြန်မာပြည် အကြောင်း နှိုင်းယှဉ် တာတွေ တက်လာလို့ ပြန်ရေးတာပါ။
မှန်တာပြောရရင် အီသီယိုပီယား ကို အလုပ် ကိစ္စနဲ့ ပထမဆုံး စသွားတုံးက လုံးဝကို အထင် မကြီးတာဗျ။
We need to practice Political Islam but I think it is also not nice to use religion in politics
July 31, 2015 July 31, 2015 drkokogyi
In Burma, Military Gov is using religion to play dirty politics. But I am sad that even in Muslim countries around the world, religion is conveniently used for their benefit.
Once I askedagroup of prominent Islamic Scholars why the Muslim Countries fail to accept even the Muslim refugees against the teaching of Islam and Quran. They smiled and answered that they all are selfish and even ordered their Religious leaders and Muftis not to teach that or some leaders blatantly ordered against the practice of Hijrah.
Eleven Media Group CEO assasination attempt was comitted by new Military Intelligence soldier
July 29, 2015 drkokogyi
“စရဖ” (စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့) OR တပ်မတော်စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ရုံးရဲ့ အကြီးအကဲကြည်း-၁၆၄၉၃၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ (စတသ-၂၂) should be held responsible if they try to cover-up. Ultimately up to Kar Choke Min Aung Hlain would be held responsible IF he keep quiet. Ref: Command Responsibility
Eleven media group ရဲ့ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ္ဋ်အောင် ကို လုပ်ကြံတဲ့ စစ်သား သန်းထိုက်အောင် က စရဖ အကူ (၂) ကဆိုတော့ ၊ စရဖ ဆိုတာဘာလဲလို့ လာမေးနေကြလို့ စရဖအကြောင်း ဗဟုသုတပါ။
ကိုမိုးဇေငြိမ်း ရေးတဲ့ စရဖ ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှ ကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
July 27, 2015 July 28, 2015 drkokogyi
Maung Maung added5new photos.
အမျိုးသားရေး-ခေါင်းစဉ်နဲ့ ငွေရှာစားသူ
GOOD. U need to kick the snout of the bitch. IF not she will keep on barking.
Ye Yint Thitsar စိတ်ချဆရာ ဒီအယုတ်တမာမနဲ့ အပေါင်းအပါတွေ မလေးရှား
တော်တော်များများကတော့ သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်နဲ့
ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာစောအောင် Saw Aung တို့
၁၇.၇.၂၀၁၅ (အီဒ်နေ့) က မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့
မလေးရှား နိုင်ငံတော်ဗလီ (Masjid Negara) မှာ ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံ
နဲ့ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းရဲစခန်းရှေ့မှာ မဖွယ်မရာလုပ်ပြတဲ့ စိတ်မကျန်း
မာသူ ဦးခင်မောင်မြင့်တို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုယှဉ်တွဲပြီး ဦးခင်မောင်မြင့် = ရဲရင့်သစ္စာ
ပါဆိုပြီး FB မှာမဟုတ်မတရားဖွနေကြတဲ့ အကြောင်း အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး။
Pathein city in Myanmar from Pathi Muslims
TQ Ma MMC.
ကို မြ အေး ဆွေး နွေး ချက် နဲ့ ဗိုလ် ချုပ် စော လွင် ဆွေး နွေး မူ